Role of iron in pregnant women – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Role of iron in pregnant women
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးမြားတှငျ သျါံာတျအရေွးကိးသညျ့အကွောငျး ကွျောငွာမြား ကနျြးမာရေးစာစောငျမြားမှတဆငျ့ ကွားဖူးကွပါလိမျ့မညျ ။ ဘာလို့ ဒီသတ်တုဓာတျဟာ အရေးကွီးရသလဲ ကိုယျလုံလုံလောကျစားသုံးရဲ့လားဆိုပွီး အတှေးဝငျကွပါလိမျ့မယျ ။ ဒီ့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျလောငျးမြားအတှကျ သံဓာတျအကွောငျးဖျောပွလိုကျရပါတယျ ။
ဘာလို့ သံဓာတျလိုသလဲ ?
အခွခေံသဘောအရ သငျ့သှေးအတှငျးရှိ အောကျစီဂငျြသယျဆောငျပေးသော သှေးနီဥမြားဖှဲ့စညျးမှုတှငျ သံဓာတျသညျ အရေးပါသော အရေးကွီးသော ဓာတျဖွဈသညျ ။ ကိုယျဝနျဆောငျကာလတှငျ မိခငျမှ သန်ဓသေားလောငျးလေးဆီသို့ သှေးမှတဆငျ့ အောကျဆီဂငျြမြား အလုံအလောကျပို့ရနျ လိုအပျသဖွငျ့ သှေးမြားမြားလိုအပျမှုနှငျ့အတူ သံဓာတျပါ အလှနျအမငျးလိုအပျလာခွငျးဖွဈသျာ ။ ဘယျလောကျထိ လိုအပျမှုကွီးမားသနညျး ဆိုလြှငျ ကိုယျဝနျမရှိခငျ နဂိုလိုအပျခကျြထပျ နှဈဆလိုအပျပါတယျ ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျအတှငျး သိုလှောငျထားသော သံဓာတျမြား ၊ ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေးမြား ၊ နစေ့ဉျစားသုံးနသေော အာဟာရမြားမှ သံဓာတျဟာ လုံလောကျစှာရရှိပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သံဓာတျအားဆေးသပျသပျမလိုအပျပါ ။
သံဓာတျအလှနျအမငျးခြို့တဲ့ခွငျးဟာ ကိုယျဝနျဆောငျကာလအတှငျး အန်တရာယျမြားလှပါတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လမစမေီ့ မှေးဖှားခွငျး ၊ ပေါငျမပွညျ့ခွငျး ၊ ကလေးငယျ၏ စိတျပိုငျးဆိုငျရာထိခိုကျခွငျးတို့ဖွဈစနေိုငျခွငျးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ ။ သို့သျော စောလငျြစှာ သိရှိပွီး သခြောစှာ ကုသမယျ သံဓာတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးနိုငျမယျဆိုရငျ အပျေါက အန်တရာယျတှဟော ပြောကျကှယျသှားမှာပါ ။ သံဓာတျအားနညျးလြှငျ မောပနျးလှယျခွငျး ၊ ခေါငျးမူး ခေါငျးကိုကျခွငျး ၊ မူးဝခွေငျး လက်ခဏာမြား ပွသလရှေိ့ပါတယျ ။ ဒါဟာ ကိုယျဝနျဆောငျ လက်ခဏာမြားဟု မှားယှငျးထငျမွငျယူဆတတျကွသညျ့အတှကျ အန်တရာယျရှိပါတယျ ။
သံဓာတျ သငျ့မှာ လုံလုံလောကျလောကျရှိပါသလား ?
ဆရာဝနျမြားအနဖွေငျ့ သငျကိုယျဝနျအပျစဉျကာလအတှငျး သှေးစဈရငျး သှေးအားနညျးခွငျး ရှိမရှိကို စဈဆေးလရှေိ့ပါတယျ ။ သှေးအားကောငျးစတေဲ့အစားအစာမြားဖွဈတဲ့ အနီရောငျရှိသညျ့ အသားမြား အရှကျဖားဖားကွီးမြား ပဲအမြိုးမြိုး ဥမြားလအစအေ့ဆနျမြား တိရစ်ဆာနျထှကျပစ်စညျးမြား စားခွငျးဟာ သံဓာတျဖွညျ့တငျးနခွေငျးပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ဒီလိုအစားအစာတှေ ပုံမှနျစားသုံးခွငျးဖွငျ့ သံဓာတျလုံလောကျမှုရှိမရှိ စိုးရိမျ မရှိပါဘူး ။ သံဓာတျအလှနျအမငျးအားနညျးကွောငျး သငျ့ဆရာဝနျမှ ပွောကွားပါက သံဓာတျအားဆေး သောကျရနျလိုအပျလာပါပွီ ။ ထို့အတှကျ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျမှ ညှနျကွားသညျ့အတိုငျး သံဓာတျအားဖွညျ့ဆေးကို တိတိကကြသြောကျရနျ အရေးကွီးပါတယျ ။
ကိုယျဝနျဆောငျကာလအတှငျး သံဓာတျအားနညျးသူ မိခငျမြားအနဖွေငျ့ မှေးဖှားပွီးလြှငျ အမြားစုမှာ ပုံမှနျအတိုငျးပွနျဖွဈသှားကွောငျး တှရှေိ့ရပါတယျ ။ သို့သျော မှေးဖှားပွီးသညျအထိ ဆကျလကျနညျးနမေညျဆိုပါက ပွနျလညျဖွညျ့တငျးရနျ လိုအပျပွီး သို့မှသာ ကနျြးမာပြျောရှငျစှာ ရငျသှေးငယျနဲ့ နထေိုငျနိုငျမှာပါ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများတွင် သါံ်ာတ်အရေးကြ်ိးသည့်အကြောင်း ကြော်ငြာများ ကျန်းမာရေးစာစောင်များမှတဆင့် ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည် ။ ဘာလို့ ဒီသတ္တုဓာတ်ဟာ အရေးကြီးရသလဲ ကိုယ်လုံလုံလောက်စားသုံးရဲ့လားဆိုပြီး အတွေးဝင်ကြပါလိမ့်မယ် ။ ဒီ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများအတွက် သံဓာတ်အကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
ဘာလို့ သံဓာတ်လိုသလဲ ?
အခြေခံသဘောအရ သင့်သွေးအတွင်းရှိ အောက်စီဂျင်သယ်ဆောင်ပေးသော သွေးနီဥများဖွဲ့စည်းမှုတွင် သံဓာတ်သည် အရေးပါသော အရေးကြီးသော ဓာတ်ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလတွင် မိခင်မှ သန္ဓေသားလောင်းလေးဆီသို့ သွေးမှတဆင့် အောက်ဆီဂျင်များ အလုံအလောက်ပို့ရန် လိုအပ်သဖြင့် သွေးများများလိုအပ်မှုနှင့်အတူ သံဓာတ်ပါ အလွန်အမင်းလိုအပ်လာခြင်းဖြစ်သာ် ။ ဘယ်လောက်ထိ လိုအပ်မှုကြီးမားသနည်း ဆိုလျှင် ကိုယ်ဝန်မရှိခင် နဂိုလိုအပ်ချက်ထပ် နှစ်ဆလိုအပ်ပါတယ် ။
ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သိုလှောင်ထားသော သံဓာတ်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးများ ၊ နေ့စဉ်စားသုံးနေသော အာဟာရများမှ သံဓာတ်ဟာ လုံလောက်စွာရရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သံဓာတ်အားဆေးသပ်သပ်မလိုအပ်ပါ ။
သံဓာတ်အလွန်အမင်းချို့တဲ့ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း အန္တရာယ်များလှပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လမစေ့မီ မွေးဖွားခြင်း ၊ ပေါင်မပြည့်ခြင်း ၊ ကလေးငယ်၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ သို့သော် စောလျင်စွာ သိရှိပြီး သေချာစွာ ကုသမယ် သံဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် အပေါ်က အန္တရာယ်တွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ ။ သံဓာတ်အားနည်းလျှင် မောပန်းလွယ်ခြင်း ၊ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ မူးဝေခြင်း လက္ခဏာများ ပြသလေ့ရှိပါတယ် ။ ဒါဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လက္ခဏာများဟု မှားယွင်းထင်မြင်ယူဆတတ်ကြသည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ် ။
သံဓာတ် သင့်မှာ လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါသလား ?
ဆရာဝန်များအနေဖြင့် သင်ကိုယ်ဝန်အပ်စဉ်ကာလအတွင်း သွေးစစ်ရင်း သွေးအားနည်းခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ် ။ သွေးအားကောင်းစေတဲ့အစားအစာများဖြစ်တဲ့ အနီရောင်ရှိသည့် အသားများ အရွက်ဖားဖားကြီးများ ပဲအမျိုးမျိုး ဥများလအစေ့အဆန်များ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ စားခြင်းဟာ သံဓာတ်ဖြည့်တင်းနေခြင်းပါပဲ ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုအစားအစာတွေ ပုံမှန်စားသုံးခြင်းဖြင့် သံဓာတ်လုံလောက်မှုရှိမရှိ စိုးရိမ် မရှိပါဘူး ။ သံဓာတ်အလွန်အမင်းအားနည်းကြောင်း သင့်ဆရာဝန်မှ ပြောကြားပါက သံဓာတ်အားဆေး သောက်ရန်လိုအပ်လာပါပြီ ။ ထို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးကို တိတိကျကျသောက်ရန် အရေးကြီးပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း သံဓာတ်အားနည်းသူ မိခင်များအနေဖြင့် မွေးဖွားပြီးလျှင် အများစုမှာ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ် ။ သို့သော် မွေးဖွားပြီးသည်အထိ ဆက်လက်နည်းနေမည်ဆိုပါက ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်ပြီး သို့မှသာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ရင်သွေးငယ်နဲ့ နေထိုင်နိုင်မှာပါ ။